Barnaamijyada waraaqaha ugu fiican ee Android | Androidsis
Barnaamijyada waraaqaha ugu fiican ee loogu talagalay Android
Qolka Ignatius | | Codsiyada Android, Habee Android
Had iyo jeer isticmaalida isla warqadda waa mid aad caajis badan. Inaad mar walba ku aragto isla gidaarada isku mid ah qalabkeena waa caajis. Ka soo horjeedka caajisnimada, mahadsanid tirada badan ee ikhtiyaariyada habeynta, waxaan gacanta ku haynaa tiro badan oo codsiyo saddexaad ah oo ay noo soo gudbiyeen. malaayiin sawirro ah si looga baxo caajiska.
Haddii aad ka daashay inaad xilliyada qaarkood beddesho sawirka asalka ah, mid aad ka hesho intaad internetka ka dhex baareyso ama midkee ku dar kuwa sameeya taleefannada casriga ah laga bilaabay suuqa, hoosta waxaan ku tusaynaa codsiyada ugufiican ee loo habeeyo asalka iyo shaashadda qufulka ee Android-kaaga.
1 Waraaqaha Bing
2 Waraaqo (Google)
5 3D My Name Live Waraaq
6 Sawirada Fortnite
7 Waraaqaha Anime
8 Waraaqaha Kubadda Cagta
9 Waraaqaha Disney
Codsiga Waraaqaha Bing Waxay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu dambeeyay ee la gaaro Android, codsi ah in waqtiga daabacaadda maqaalkan aan laga heli karin Play Store, laakiin waan awoodnaa si toos ah uga soo dejiso APK Mirror. Dukaanka Play-ka waxaan ka heli karnaa codsiyo kala duwan oo u adeegsada 'Bing' cinwaankooda xiga dhinaca Waraaqda. Midkoodna maahan waxa ay Microsoft na siiso. Si loo hubiyo, kaliya waa inaan aragnaa magaca soo-saaraha, haddii uusan ahayn Microsoft, ma ahan midka rasmiga ah.
Waraaqaha Bing, oo ah codsi bilaash ah oo bilaash ah oo aan lahayn xayeysiis, ayaa noo oggolaanaya inaan ku raaxeysano waraaqaha cajiibka ah ee aan ka heli karno mashiinka raadinta Bing, sooyaalkii aan ku beddeli karno gacanta ama u qaabeyn karno si sawir ka duwan loo soo bandhigo maalin kasta. Si ka duwan barnaamijyada kale, halkan kuma hayno qaybo, laakiin maalin kasta waxaan gacanta ku haynaa tiro badan oo sawir-gacmeedyo ah, sidoo kale sawir-gacmeedyo dusha sare ah.
Mid kale oo ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee aan ku rakibi karno qalabkeena si aan u habeynno waraaqda gidaarka ee Google Wallpapers, waa codsi asal ahaan lagu rakibay qaybta Pixel laakiin sidoo kale waxaa laga heli karaa Play Store si bilaash ah.
Goolge wallpapers, waxay noo ogolaaneysaa inaan kala doorano qaybaha kala duwan, koox sawiro ah oo aan dooneyno inaan u isticmaalno sida gidaarka taleefanka casriga ah, inta badan muuqaalada muuqaalka, inkasta oo aan sidoo kale heli karno tiro badan oo sawiro ah meeraha dhulka oo ay ugu mahad celineyso Google Earth.
Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan sameysano galleey u gaar ah si aan awood ugu yeelano inaan kala soo baxno giraangiraheena, kuwaas oo ah sawirada in, marmar, aan dooneyno in lagu soo bandhigo asalka qalabkeena Kaliya laakiin waa inuu kaliya la jaan qaadi karo Android 7.0 Nougat.
Codsigan, oo loo heli karo soo dejin bilaash ah oo leh xayeysiis isku dhafan (xayeysiisyo aan ka saari karno adoo bixinaya 2,19 euro), wuxuu na siinayaa tiro badan oo waraaqo ah oo la jaan qaadaya dhammaan moodooyinka casriga ah iyo cusbooneysiin joogto ah.
Wargeysyada, waxay nagu siinayaan codsigan:
Isbedelka otomaatiga ah ee waraaqaha, halkaasoo adeegsaduhu uu dejinayo inta jeer ee ay doonayaan in la beddelo.
Warqadaha sawir qaadista ah, ee noo oggolaanaya inaan ku raaxeysano fiidiyowyada iyo saameynta sida gidaarka
Dhammaan waraaqaha ayaa loo heli karaa shaashadda guriga iyo shaashadda qufulka labadaba.
Waxay na siisaa shaqada Parallax, oo na siisa dareen dhaqdhaqaaq markaan dhaqaajinno taleefanka casriga ah, oo ah saameyn lagu raaxeysto gebi ahaanba markaan sawirrada muuqaalka kore ku isticmaalno gadaal.
Waxay leedahay qaab mugdi ah iyo qaybta ugu cadcad halkaas oo aan ku dari karno waraaqaha derbiga ah ee aan ugu jecel nahay inaan marwalba gacanta ku heyno si aan u isticmaalno.
Gidaar bilaash ah iyo taariikh asal ah
Developer: Xalka Software INITLogic
Haddii aad jeceshahay waraaqaha sawirada leh, mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee noocan ah asalka waa Walloop, oo ah codsi aan si bilaash ah uga soo dejisan karno, wuxuu isku darayaa xayeysiisyada iyo sidoo kale iibsashada barnaamijka, iibsiyada u dhexeeya 1,99 euro ilaa 5,99 euro). In kabadan 500.000 dib u eegis, celceliska dhibcaha waa 4,5 xiddigood.
Walloop wuxuu na siiyaa qaybo kala duwan: 4K, AMOLED, MADOW, ANIME, VAPORWAVE, NATURE, JACAYL iyo SU'AALO BADAN. Sida codsiyada badankood ee waraaqaha, waxay noo ogolaaneysaa inaanu jaangooyono inta jeer ee aan dooneyno in sawirrada la beddelo, ha ahaadaan kuwo taagan ama muuqaal leh. Waxay kaloo noo ogolaaneysaa inaan sawir gooni ah ku dhigno shaashadda qufulka iyo shaashadda guriga.
Dhibaatada ka jirta dhamaan codsiyada na siiya sawirada sawirada leh ayaa ah isticmaalka batteriga, isticmaalka batteriga oo mararka qaar, iyadoo kuxiran fiidiyowga aan ku isticmaalno asalka, mararka qaar wuxuu sababi karaa isticmaalka bateriga xad-dhaafka ah, markaa si joogto ah u isticmaal Ma ahan talo.
Wallpapers Live - Walloop
3D My Name Live Waraaq
Haddii waxa aad rabto inaad astaysto warqadda darbiga ee casriga ah marka lagu daro shaashadda qufulka ay suurtagal tahay in la qoro waxa aad rabto, iyo magacaaga, magaca lammaanahaaga, kooxdaada kubbadda cagta, xayawaankaaga ama magac kale oo aannu ku hayno 3D My Name Live Wallpaper application, waa codsi bilaash ah oo bilaa xayeysiis ah.
Codsigan ayaa noo oggolaanaya inaan soo bandhigno qoraal kasta oo aan dooneyno, kala dooranno noocyada noocyada noocyada kala duwan ah oo aan dhisno haddii aan dooneyno inay ahaato waraaqo gogol xaar ah ama muuqaal leh. Mar alla markii aan abuurnay gidaarka aan dooneyno, natiijada ayaan u dhoofin karnaa fiidiyoow, waxaan ku dari karnaa cod ama farriin cod ah oo waxaan kula wadaagi karnaa WhatsApp ama barnaamij kale oo fariin ah
Developer: Magaceyga Cube Apps
Haddii aad tahay ciyaaryahan joogto ah Fornite Oo waxaad dooneysaa inaad shakhsiyeysid taleefankaaga casriga ah ee leh darbiyada cinwaankan, halkan waxaa ku yaal dhowr codsi oo noo oggolaanaya inaan si dhakhso leh u qabanno, si fudud oo waliba bilaash ah.
Wallpapers Battle Royale 2022
Haddii aad rabto inaad isticmaasho asalka dhaqdhaqaaqa Fornite, waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa barnaamijyadan.
FortLive - Battle Royale Live Sawirada
Developer: Maqaarka Abuuraha Co.
Launcher HDRoyale, For, qoob ka ciyaarka mawduuca
Developer: Mawduucyada & Sawirada Qaaliga ah ee 2019
Nooc kale oo ka mid ah noocyada ugu badan ee ay adeegsadayaashu adeegsadaan waa Anime, oo ah nooc sidoo kale leh tiro badan oo codsiyo ah oo noo oggolaanaya inaan wax ka beddelno gidaarka leh tiro badan oo sawirro ah, qaarkoodna ay socdaan.
Anime Wallpaper HD Kawaii Gabar
Isboortiga quruxda badan ee Isbaanishka, sida wadamada kale ee Latin America, sidoo kale wuxuu leeyahay wakiil weyn codsiyada si loo habeeyo asalka qalabkeena.
Isku soo aruurintaan, ma seegi karno codsiyada leh darbiyada ugu fiican ee ka socda shirkadda weyn ee Disney, in kasta oo aan kaliya gacanta ku hayno hal codsi oo leh tiro badan oo waraaqo ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Barnaamijyada waraaqaha ugu fiican ee loogu talagalay Android
U ciyaar sida boqor oo kale: markaa waxaad ku isticmaali kartaa Xbox One xakamaynta Android-kaaga
LG waxay ku xirxiraysaa ololeheeda ugu dambeeyay ee xayeysiinta galmada. Shabagyadu way gubtaan!